Uma nithanda sokunethezeka, induduzo kanye nokuzijabulisa ukhombise impilo, kufanele nakanjani sinake ihhotela Otium Ihhotela Olwandle Ayisikhombisa 5 *. Lapha uzothola konke okudingayo ukuze wenze ukuhlala kwakho sikhumbuleke futhi acacile.
Spa Ihhotela Otium Ihhotela Olwandle Ayisikhombisa 5 * selikhanyise ngempela nomlando omude, kusukela yasungulwa ngo-1998. Ngo-2007, ukubuyiselwa ngokugcwele lenziwe, futhi ngo-2013 kwaba khona kabusha yokubeka uphawu ehhotela, okwathi ngemva kwalokho wajoyina inethiwekhi abadumile Otium. On endaweni sq 100 000. m. main isakhiwo ezinhlanu storey futhi eziningana Villas ezintathu-level. Ukuze izivakashi zinikezwa amaningi ingqalasizinda.
Isakhiwo resort Otium Ihhotela Olwandle Ayisikhombisa 5 * itholakala endaweni emangalisayo enhle lapho ulwandle azure kuhlanganiswe ngokuphumelelayo emahlathini amakhulu oluhlaza. Itholakala ethandwa izivakashi edolobhaneni Manavgat, okuyinto cishe 70 ukusuka Antalya Airport 5 km ukusuka edolobheni Side. Ungathola lapha ngeteksi noma Shuttle ibhasi, ukusebenzisa njalo kusuka esikhumulweni sezindiza.
Ekhuluma amakamelo ngesikhathi abantu abajwayele ukuvakasha kuyona Otium Ihhotela Olwandle Ayisikhombisa 5 * (Turkey, Side), kuyafaneleka ukuthi bayahambisana nomthetho obizwa ngokugcwele nezindinganiso zamazwe nezimfuneko eziphoqelelwe ngokwabo izivakashi. Izivakashi ungahlala amafulethi izigaba ezilandelayo:
Igumbi elisezingeni elejwayelekile ine indawo 25 sq. m. Zimbili isivakashi omdala (nengane, usebenzisa embhedeni ekhona noma ezengeziwe) kungabhekwana kahle. Kwelinye igumbi isehlane zone esinamakamelo, ephasishi endaweni encane bawente. Kukhona esibukweni omkhulu, okuyinto ethatha cishe lonke udonga.
"Junior Suite" kuyinto square metres 30. m. It angazamukela abantu 4. Igumbi izici embhedeni enkulu double, kanye ifenisha upholstered, okuyinto, ngemuva udonga zokuhlobisa, yakha indawo okuhlalwa. It has siqu emphemeni yayo kwanikeza.
"Isudi" - a Suites zikanokusho Executive, elalihlotshiswe ngefomethi studio. kuyaqondakala ukuthi ekamelweni elilodwa ahlukaniswe igumbi lokulala kanye abaphilayo endaweni yokudlela. Isici esiphawulekayo amakamelo angabhekwa design zikanokusho shades yekhofi Milky.
abahambi Abaningi ukuza Otium Ihhotela Olwandle Ayisikhombisa Side 5 * kanye nomndeni wakho. Abakwazi bayakwazisa kukho okulandelayo yokuhlala:
Igumbi Family - amakamelo amabili amakhulu eyenzelwe abantu 6. Kukhona omkhulu kabili bese 4 imibhede olulodwa. Ngamunye emakamelweni ifakwe yokugezela yayo siqu.
Uphakeme Igumbi lomndeni siqukethe lokulala (elikhulu futhi umbhangqwana emibhedeni emincane) kanye egumbini lokuphumula. Kusofa upholstered ifenisha angazamukela izivakashi ezengeziwe.
Ukuze imikhaya encane ekahle ikamelo ejwayelekile noma "suite junior", ngaphezu kwalokho ifakwe imibhede embhedeni.
Izinga anda wenduduzo, alinikela ehhotela Otium Ihhotela Olwandle Ayisikhombisa 5 *, lihlotshaniswa anhlobonhlobo izindawo enikeziwe emakamelweni. Kuyaphawuleka la maphuzu alandelayo:
umoya emaphakathi (kuye ngokuthi inkathi, kungenzeka Ukupholisa noma Ukushisa emoyeni);
TV neziteshi eziningi zomhlaba;
ifoni yasendlini, okuyinto ungasebenzisa yamakholi phesheya, kanye ukuxhumana namasevisi ihhotela;
Inthanethi engenantambo, ukufinyelela okuyinto mahhala;
inhlanganisela okuthembekile ephephile, okuzokwenza ukuqinisekisa ukuphepha ngezinto zakho zenani elikhulu;
yini ikhofi noma itiye isethi, okubandakanya isevisi kanye isikhwama isiphuzo;
mini-bar, okuyinto nsuku zonke ogcwele amanzi kanye neziphuzo zezithelo;
lokugezela elineshawa, hairdryer, bathrobes futhi zokugeza;
Izitolo for zasendlini, kanye ukushaja zobuchwepheshe zakho.
Inani nsuku zonke yisevisi yokuhlanza kanye indawo okugeza amathawula, kodwa nelineni embhedeni washintsha Njalo ngemva kosuku olulodwa. Futhi uzinake kuyinto amakamelo angaphakathi Otium Ihhotela Olwandle Ayisikhombisa 5 *. Photo ebonisa umklamo enhle ngemibala egqamile ne nangezindlela ezimibalabala.
Elinye lamaphuzu ebaluleke kakhulu ekuqinisekiseni ukuphumula ngokwanele iIgama. Ihhotela Otium Ihhotela Olwandle Ayisikhombisa 5 * lolu daba ukulingana ngokukhulu ukucophelela. Yokudlela main inikeza izivakashi ukuchitha ukudla ngokugcwele abathathu, kanye umthamo encane phakathi ibhulakufesi futhi kwasemini. Imenyu lezitsha kuhlanganisa izitsha lezizwe ezihlukahlukene zomhlaba. Kanye ngesonto, idina wakhonza ngesimo okuthiwa ebusuku Turkish uma wasuthisa ukudla temdzabu kuphela zendawo ukusebenza aphethwe.
Ungakhohlwa kuleli hhotela kanye nokudla izivakashi omncane. Kubo, kukhona inikezwa ehlukile Ukudla amamenyu. Ngaphezu kwalokho, yokudlela ifakwe endaweni ekhethekile lapho omama ungathola konke okudingayo ukuze ulungiselele ingane ukudla. Lena esiqandisini futhi microwave, kanye blender, futhi Sterilizer ngoba amabhodlela nokuningi. Kukhona izihlalo zezingane ekhethekile imilenze okusezingeni eliphezulu.
Ntambama, yokudlela izivakashi ziphathwa kuya okumnandi Turkish ice cream. Futhi lapha ungakwazi ukujabulela iziphuzo izinga esusela zendawo ezivela abakhiqizi kwezilwandle.
Yokudlela lihlotshiswe ku isitayela zakudala nge predominance ka beige iyashintsha iyaphupha ibe amathoni. I charm ekhethekile ka ehholo lokudlela inika inlay gilt nezinkuni. Izivakashi abathanda ukudla endaweni evulekile, bangahlala phezu ithala ongaphandle.
zokudla abaningi ezisebenza ehhotela Otium Ihhotela Olwandle Ayisikhombisa 5 *. Side inama inqwaba iIgama izikhungo, kodwa izivakashi eziningi ngisho bendawo uthanda labo ezisebenza kule ehhotela. Ngakho, izivakashi bayakhuthazwa ukuvakashela zokudlela ezilandelayo:
Umthamo yokudlela ivula iminyango yayo izivakashi esikhathini kusuka 11:00 kuya ku 16:00. Izivakashi bengase bakulume fresh ehla, amasaladi, ukudla okunoshukela, izithelo nemifino, sandwich kanye nezinye izinhlobo zokudla. Futhi, kule yokudlela ungahlala baphuze ikhofi noma itiye.
Turkish a la Carte yokudlela kuzokuvumela Gxila emkhathini i Oriental inganekwane. Lapha ungakwazi ukujabulela zonke nezinjabulo cuisine yokuqala yendawo, kanye ulalele umculo kazwelonke. Uma isikhathi lokuphumula, ungavakashela lesi yokudlela mahhala (pre-ukubhaliswa edingekayo).
Mexican cuisine yokudlela ziyojabula nge izinongo okubabayo, nososo ashisayo, kanye Umkhathi fun ukuthi idalwe zihambisane nezinsimbi zomculo ezifanele. Ingaphakathi yokudlela senziwa ngokuhambisana namasiko Latin America.
Ngu kolwandle siphela yokudlela kanokusho kwasolwandle. Lapha ungakwazi ukunambitha izitsha ezivela kwasolwandle, eyosiwe okuphekiwe ngezinye izindlela.
Inani elikhulu of iziphuzo ezidakayo nezinto zokuhlanza esithambile futhi cocktail kukhona izivakashi etholakalayo Otium Ihhotela Olwandle Ayisikhombisa 5 *. Zombili, ukuzijabulisa yayo emnandi, kumane nje akunakwenzeka ukuba sicabange ngaphandle imigoqo eziningi. Uma ukhuluma ngezilonda leli hhotela esithile, kukhona izikhungo umsebenzi elandelayo kuwe:
Ibha yokwamukela izivakashi ivuliwe ubusuku nemini, ukuhlinzeka izivakashi ithuba uphumule esimweni nokunokuthula ngokuzinikela inkomishi yekhofi. Kuyaphawuleka ukuthi kukhona amadokodo eziningana ngabanye, lapho kungekho noyedwa oyoba ukuphazamisa yangasese ingxoxo noma ibhizinisi izingxoxo zakho. Ngezikhathi zakusihlwa, isikhungo linikeza upiyano bukhoma umculo.
Bar "yokwanda" isebenza azungeze ichibi. Ngakho, ungakwazi ukujabulela cocktail ngaphandle kokushiya amanzi. Futhi lapha uhlala unaphakade ukuzijabulisa.
Ibhishi ibha - indawo ozithandayo kulabo kuzivakashi uthanda ukuhlala lonke usuku olwandle. Lapha ungakwazi hhayi kuphela ukuphuza isiphuzo wamukelekile, kodwa futhi ukuba adle bendabuko isinkwa Turkish.
Ngisho ku iholidi lomkhaya, abazali kufanele ukwazi ukuthatha ikhefu kusukela izingane, kanye nezingane - kubazali babo. Ukuze kufezekiswe lo mgomo kuzosiza club yezingane. Lapha, izingane ziyoba fun ne amakilasi alandelayo:
ebhukuda izifundo in pool yezingane;
imidlalo esebenzayo ku lokudlala;
Ukufunda izinto eziyisisekelo origami;
ukupheka amakilasi (ukupheka pizza, amakhekhe nezinye izitsha);
ukubukela amabhayisikobho zezingane kanye opopayi;
ukubuka imibukiso animated;
Uma ufuna uphumule futhi bayakhohlwa izinkinga kanye nomsebenzi, ngokuqinisekile ukuya Otium Ihhotela Olwandle Ayisikhombisa 5 *. Turkey idume emabhishi ayo amahle. Lapha uzothola ukufinyelela 140 amamitha ugu, oluneziqhingi isihlabathi futhi amatshe esihle. Lapha ungasebenzisa izihlalo emphemeni, ilanga kombhede kanye omatilasi, futhi for imali eyengeziwe, ungakwazi ukujabulela amanzi ezemidlalo.
Uma ulwandle abonakale udlubulunda, ungachitha isikhathi echibini. Le ndawo echibini 1600 sq. m ilungele ukubhukuda, futhi uma ufuna uphumule, bese wave. Kukhona futhi ezimbili amachibi zezingane awnings ukuvikela elangeni yokuzijabulisa.
Buyisela kuvumelana kwalo, ukuthuthukisa impilo, futhi ukulondoloza ubuhle kanye nentsha kuzosiza spa. Lapha ukufinyelela ezinsizakalweni ezifana:
ejimini ngeseluleko kusukela nomqeqeshi ngokuyikho;
uyaxebuka wonke umzimba noma iziza ngabanye;
Kuningi okuhle elinde wena, uma ukhetha Otium Ihhotela Olwandle Ayisikhombisa kuyona 5 *. Izibuyekezo basho lokhu okulandelayo:
kulo lonke ihhotela futhi emakamelweni zihlanzekile kakhulu futhi ukhululekile;
ezimangalisayo izithombe for kokubili izingane kanye nabantu abadala;
abasebenzi inobungane futhi unake (abasebenzi ezibuza njalo uma wonke izivakashi bayajabula futhi uma unanoma yimiphi kokuma);
ukubhaliswa kanye zokuhlala abasebenzi reception, uma kungenzeka, acabangele zonke izifiso izivakashi mayelana izinombolo;
kusihlwa endaweni yokwamukela izivakashi kudlala umculo amahle bukhoma;
umsebenzi okuphezulu otusekayo club yezingane - kuthinta Uhlelo ukuzijabulisa ocebile, kanye nobuchwepheshe bale izithombe;
e yokudlela, izivakashi nethuba ugcwalise ifomu lapho ungacacisa zonke izikhalazo mayelana ehhotela;
abaphathi okhuluma isiRashiya ukusiza ngokushesha ukuxazulula zonke izinkinga zingaveli inqubo eziphilayo;
ukudla okumnandi futhi ezihlukahlukene;
endaweni amahhotela Kuhlehliswe izindlela ezithambile ekhethekile kuhlinzekelwe jogs ekuseni;
ebhishi egijima iqembu elikhulu abatakuli;
uma nje ngaso amakamelo khulula, izivakashi hlala ngokushesha lapho usufika kuleyo ndawo, ngaphandle kokulinda ukuba amahora elilinganisiwe;
emphemeni izihlalo ogwini eningi, ngakho hlala esihlalweni kusengaphambili akudingekile;
kwimenyu lezitsha, kukhona uhla enkulu kwasolwandle, kanye izinhlobo eziningana inyama;
endaweni izingane ezinhle e-yokudlela.
Ngeshwa, kunoma iyiphi ehhotela iyindawo sintula kanye zamehlo. Lokhu kusebenza futhi Otium Ihhotela Olwandle Ayisikhombisa 5 *. Izibuyekezo 2015 zibonisa izinto ezilandelayo ezimbi:
yezakhiwo kanye umhlobiso ingaphakathi ehhotela bheka kancane olukhuni;
ukuqhela ezahlukene oweta e yokudlela ehlukile mayelana nomsebenzi wabo (othile enza okuthile umphefumulo nangokuhlakanipha, kuyilapho abanye - ukucekela nanganembile);
ogwini uma ufaka amanzi endaweni eshelelayo ipuleti itshe ongatholakala kakhulu hit uma ukuwa;
ehhotela kaningi ubuthi zilotshwe;
esenana ehhovisi ehhotela izinga nje extortionate;
phakathi endlini yokugezela yokugezela esikhundleni udonga efakwe ingilazi Frosted, okuyinto prosvechivayas kudala ezinye ngokuphazamiseka.
udumo omkhulu Otium Ihhotela Olwandle Ayisikhombisa 5 *. Izibuyekezo basikisela ukuthi leli hhotela kuyinto kumfanele eliphakeme isimo aphambili. Lapha, konke kwenziwa induduzo kanye nekutfokotela izivakashi. abasebenzi Eziwusizo emamatheka kusukela kuqala usuku kwi disarms. Le ndawo ebabazekayo umcabango ejabulisa hhayi nje ngenxa yobuhle bayo, kodwa futhi ukusebenza. Futhi-ke, sigcwalisa isithombe amandla enkulu ohlelweni "zonke okufakayo".
Izimangalo izivakashi ehhotela abangelutho. Ngokwesibonelo, i-aphambili ehhotela ingaphakathi kungaba yesiteleka kakhulu futhi yasekuqaleni. Futhi, ezinye ukugxekwa ebhishi, futhi kuba - entry esingesihle olwandle. Kodwa uma uhamba a amamitha ambalwa ukuze ohlangothini (ukuze ugu ehhotela elingumakhelwane kunethiwekhi efanayo), ungakwazi ukujabulela elithambile phansi sandy ngaphandle ngetshe elilodwa.
Amahhotela Ufa - khetha iholidi yasekhaya.
Sezinso Abanikeli. Donation eRussia